अब विभाजन होइन, एकताबाट सम्भव छ अार्थिक समृद्दि : अन्तरवार्तामा महेश बस्नेत-Setoghar
अब विभाजन होइन, एकताबाट सम्भव छ अार्थिक समृद्दि : अन्तरवार्तामा महेश बस्नेत
महेश बस्नेत, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व उद्योग मन्त्री
हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य रहेका महेश बस्नेत भक्तपुर–२ का सांसद पनि हुन् । समग्र रुपमा भक्तपुरको विकासका लागि दत्तचित्त भएर लाग्ने बस्नेत गुन्डुबाट २०५१ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २३ बर्षकै उमेरमा सम्भवतः नेपालकै कम उमेरको गाविस अध्यक्ष भएका महेश बस्नेत त्यसबेला देखि नै जनताका बीचमा स्थापित भएर विकास निर्माणका काममा अहोरात्र खटिनै रहे । भक्तपुर जिल्लामा नेमकिपा र नेपाली कांग्रेसको दबदबा हुँदा समेत उनले पार्टीलाई उच्च स्थानमा ल्याउन सफल भएका छन् । विगतमा उद्योगमन्त्री भई औद्योगिक सुधारको लागि प्रयाप्त कामहरु अघी सारेर चर्चामा आएका बस्नेतसँग अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अबको कार्यदिशा, मुलुकको बजेट र मुलुकको समृद्धिका आधार निर्माण लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मुलुकको समग्र राजनीतिक घटनाक्रम प्रति यहाँको धारणा के बताइदिनुहोस् न ?
नेपालका जनताहरु जुन रुपमा सुखी हुनुपर्ने थियो, मुलुकले समृद्धिको जुन गति लिनुपर्ने थियो, त्यो कार्य निकै ढिलो गरी हालै मात्र शुरुवात भएको छ । मुलुकमा राम्रो प्रणाली विकास हुन नसकेका कारण अहिले सम्म पनि हाम्रा स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग हुन नसक्दा र श्रमशक्तिको सही तवरले उपयोग हुन नसक्दा हामीले राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी अघी बढ्न नसकेको यथार्र्थ छिपेको छैन । अहिले सम्म पनि हाम्रा योजनाहरु सही तवरले प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । मुलुकको भाग्य र नेपालीहरुको भविष्यलाई मध्यनजर गरेर अघी बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका मुलुकका दुई ठूला राजनीति पार्टीहरु नेकपा (एमाले) र माओवादीलाई जनताहरुबाट २ तिहाई मत प्राप्त भएको छ । संयुक्त सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै छ । जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता बमोजिम नै अहिले नेपालका २ ठूला दलहरु एक बनेका छन् ।
अब हाम्रो एकीकरण पश्चात्को वृहद नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई मुलुकको अस्थिरता अन्त्य गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा अघी बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । हामीले अब जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई साकार पार्नु छ । हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं कि अब मुलुक विकास निर्माणको सही बाटोमा अघी बढ्नेछ ।
समाज प्रति उत्तरदायित्व बहन गरेका संस्थाहरुका भूमीकालाई थप मजबुत बनाउन सरकारले आगामी दिनमा के गर्नुपर्ला ?
अहिले मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकृति र विसंगतिलाई सबै क्षेत्र (कर्मचारी संयन्त्र, राजनीति, निर्माण क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, यातायात, श्रम लगायत)बाट अन्त्य गर्दै मुलुकमा भएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र निवारण गर्नु मुलुकै समृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन आउँछ । यसको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतलाई समेत थप सशक्त बनाउँदै सरकारका गतिविधिहरु अघी बढाउनु आवश्यक छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिनको अवधिलाई यहाँ एउटा पार्टीको एक युवा नेता हुनुहुन्छ, अहिलेको सरकारका गतिविधिहरुलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ ?
सरकार निर्माणको सय दिन समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति जग निर्माणमा नै बढी केन्द्रित रहेको अवस्था छ । यसले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गरेको छ । सुन तस्करीमा संलग्न भएका ठूला अपराधीहरुलाई कारर्वाही प्रक्रिया अघी बढाएको छ । सबै किसिमका माफिया र विचौलियापन अन्त्यको निम्ति पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ । लामो इतिहास बोकेको हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध नेपालमा लगाइएको नाकाबन्दी पश्चात् तिक्ततापूर्ण रहेकोमा त्यसलाई सुधारको निम्ति नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले सफलताको शिखरमा पु¥याउने काम आज सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको छ । साथै यसले २ देशको सम्बन्ध सुधारको निम्ति महत्वपूर्ण भू्मीका खेलेको छ । राम्रो र सबल नेपालको निम्ति समेत अत्यन्तै महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ । यी खालको गतिविधिले गर्दा समग्र दुई देश बीचको आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने काम भएको छ ।
अहिले सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र आफू पनि भ्रष्टाचार नगरी अरु कसैलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिवद्धता लिएर अहिलेको सरकार अघी बढिरहेको छ । यी सबै कुराहरुलाई हेर्दा सरकारले जनतामा सुधारको आशा र अपेक्षा जगाउन सफल भएको अवधि समेत मान्न सकिन्छ ।
यस पटकको बजेटलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले जेठ १५ मा पहिलोपटक बहुमतीय कम्युनिष्टहरुको सरकारबाट बजेट भाषण समेत गरिसकेको छ । यसपटकको बजेटमा समेत मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति विभिन्न नयाँ सृजनात्मक कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । बजेटमा नेपालीहरुको प्रति व्यक्ति आय ५ बर्ष भित्रमा दोब्बर बनाउने, जिडिपीमा सुधार गर्दै यसलाई २ अंकमा पुर्याउने लगायतका कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् । हाल नेपालीहरुको बार्षिक सरदर आय १ हजार डलरको हाराहारीमा रहेकोमा यसलाई डबल गराउँदा हुने आय करिब २ हजारलाई कसरी समानुपातिक बनाउने भन्ने कुरा पनि चुनौतीको रुपमा रहन सक्छ । आय समानुपातिक हुन नसके कसैले करोडौं कमाउन सक्ने तर कोही भने अहिले भन्दा पनि नाजुक अवस्थामा पुग्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ । हामी यसमा सचेत छौं । यसको निम्ति हामीले विकासको समानुपातिक ढाँचा के हुन सक्छ भन्ने मान्यताले समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति तीव्र गतिमा अघी बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
विकास र रोजगारी सृजनाको हिसाबले हेर्दा बजेटका मुख्य विशेषताहरुलाई कसरी विष्लेषण गर्नुहुन्छ ?
यस बर्षको बजेट युवा जनशक्ति लक्षित छ । बार्षिक ५ लाख युवाहरुलाई रोजगारी दिने योजना बजेटमा संलग्न छ । अहिले हम्रो आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा यसलाई बढाएर ८ प्रतिशत पु¥याउने कुरा बजेटमा सम्बोधन भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको नाममा समेत यस पटकको बजेटले पर्यटन, कृषि लगायतमा केन्द्रित रही बजेट तर्जुमा गरेको छ । कृषिमा अहिले हुँदै आएको उत्पादनलाई दोब्बर बनाउनको निम्ति पनि बजेट मार्फत सम्बोधन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा ठूला उद्योग क्षेत्र निर्माण गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने र भित्री मधेशी क्षेत्रमा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरी यसलाई औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने, प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख कर्जा दिने, महिला उद्यमीहरुलाई ७ लाख सम्म कर्जा दिने, विदेशबाट फर्केर आएका व्यक्तिहरुको परियोजना धितो राखेर १० लाख सम्म कर्जा दिने लगायतका कार्यहरु रोजगारी सृजनामा नै केन्द्रित छन् । यसै गरी सेवामूलक कामहरु अन्तरगत ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य वीमा, महिलाहरुको लागि सुत्केरी भत्तामा वृद्धि लगायत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यहरु समेत बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ ।
सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने, हरेक नेपालीको अनिवार्य बैंक खाता, सम्पूर्ण विवरण अनलाईन डिजिटल सिष्टममा लैजाने लगायत सूचना प्रविधिमा आधारित कामलाई समेत प्राथमिकताको साथ अघी बढाइएको छ । यसैगरी ठेक्कापट्टालाई व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यवस्थित गर्ने, पैसा लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन प्रक्रिया अघी बढाउने, अन्य ठूला भौतिक निर्माण कार्यहरु शुरु गर्ने, पूर्व पश्चिम रेल, काठमाडौंमा मोनोरेल, मेट्रोरेल शुरु गर्ने, भैरहवामा एयरपोर्ट यसै बर्ष सम्पन्न गर्ने, पोखरा, सिमरा लगायतमा एयरपोर्ट निर्माणको पहल गर्ने, विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत लगायतका एयरपोर्टलाई क्षेत्रीय एयरपोर्टको रुपमा विकास गर्ने र छिमेकी देशहरुमा समेत फ्लाइटहरु उडाउने लगायतका महत्वपूर्ण विकास कार्यहरु समेत बजेटमा समेटिएका छन् । यसैगरी स्थानीय तहलाई प्रयाप्त बजेट छुट्याइएको छ । समग्रमा बजेट निकै आकर्षक छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरु हुन सक्छन् । जे भएपनि यस पटकको बजेट समग्रमा जनताको भावना र आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै तय गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तहलाई सरकारले २० करोड देखि ८० करोड सम्मको अनुदान दिएको छ । यसै गरी स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान समेत दिइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, स्वास्थ्य चौकी, औद्योगिक ग्राम लगायतको निम्ति ससर्त अनुदान दिइनेछ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वय हुने गरी बजेट छुट्याइएको छ । नयाँ संरचना बमोजिम स्थानीय तहलाई मजबुत र स्वायत्त बनाउने किसिमले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अहिले सरकारले बजेट मार्फत तय गरेका योजनाहरु सार्थक पार्न नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षीको भूमीकालाई यहाँले कुन रुपले हेर्नुभएको छ ?
राजनीतिक दलहरु प्रति जनताको जुन म्यान्डेड छ, सोही बमोजिम त्यो सबै राजनीतिक दलहरु निर्देशित हुनुपर्छ । अबको समय विकासलाई गति दिने समय भएको कारण सोही बमोजिम सहयोग पुग्ने किसिमले प्रतिपक्षी दलले पनि रचनात्मक भूमीका खेल्नुपर्छ । अहिले नेपाली जनताहरुले ५ बर्ष कम्युनिष्ट पार्टीलाई राज्य सत्ता चलाउने र काङ्गे्रसलाई सशक्त प्रतिपक्षको भूमीका निर्वाह गर्न चुनाव मार्फत चुनेर पठाएका छन् ।
नेपाल सरकारले भर्खर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रतिपक्ष दलले पनि सरकारलाई महत्वपूर्ण र सृजनात्मक सुझाव समेत दिनुभएको छ । ती सुझावहरुलाई समेत समेट्ने अबका दिनमा सरकारले गतिविधिहरु अघी बढाउनेछ ।
यसपटकको समग्र बजेट भक्तपुरको लागि चाहिँ कस्तो छ ?
यसपटकको बजेट हरेक जिल्लामा स्थानीय तहलाई आधार मानी विनियोजन गरिएको छ । सोही बमोजिम त्यहाँको संरचना बमोजिम बजेट विनियोजन भएको छ । भक्तपुरमा ४ स्थानीय तहहरु छन् । त्यसबाहेक कोटेश्वर–जडिबुटी सुरुङमार्ग बन्ने कुरा बजेटमा सम्बोधन भएको छ । त्यसैगरी हनुमन्ते खोला सफा गर्ने कुरा पनि सम्बोधन भएको छ । यस क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएका ३ शहरको लागि बजेट छुट्याइएको छ । बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण, काठमाडौं–भक्तपुर सडक विस्तार, भक्तपुर–धुलिखेल सडक विस्तार, पेप्सीकोला–सल्लाघारी सडक विस्तार, च्याम्हासिंह नाला सडक विस्तार लगायत अन्य १३ ओटा सडकको लागि समेत बजेट प्रयाप्त छुट्याइएको छ । यसलाई हेर्दा भक्तपुरको लागि विनियोजित बजेट कमी होइन । यद्यपि भक्तपुरका ४ ओटा स्थानीय तहलाई मात्रै आधार मानेर हेर्दा भने भक्तपुरको बजेट तुलनात्मक रुपमा कम देखिन सक्छ ।
बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेका कुराहरु चाहिँके–के हुन् ?
बजेटमा वृद्ध भत्ता पनि केही बढेको भए राम्रै हुन्थ्यो । कर्मचारीको तलब भत्ता पनि यस पटक बढाइएको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशको लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा केही थप गर्ला भन्ने आकाङ्क्षा थियो । यद्यपि यस पटक संविधान कार्यान्वयन गरी पहिलो पटक विनियोजित यस बजेटमा छुटेका यस्ता कुराहरु आगामी बजेटमा भने सम्बोधन हुनेछन् ।
अबका हाम्रा विकासका प्राथमिकताहरु के हुनुपर्छ ?
अब हामीले नेपालमा जति धेरै उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सक्छौं, जति धेरै रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं, त्यति नै हामी हाम्रो मुलुकलाई विकासको दिशामा अघी बढाउन सक्छौं । मुलुकको विकासको निम्ति जनजिविकालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी हामीले विकास कार्य अघी बढाउनु जरुरी छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सडक विस्तारमा अझै व्यापक वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो हुन सकेमा मुलुकको विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यसैगरी कृषि, पर्यटन, जलविद्युत लगायत साना र मझौला उद्योगलाई समेत व्यवस्थित तवरले अघी बढाउनुपर्ने जरुरी छ । यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा समेत हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंले आफू निर्वाचित भक्तपुरको विकासको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
निर्वाचन पश्चात् अहिले हामीले ६ महिना देखि सांसदको रुपमा जिम्मेवारी पाएका छौं । यस अवधिमा हामीले भक्तपुरलाई ५ बर्षमा कुन अवस्थामा पु¥याउने भन्ने निश्चित योजना र जिम्मेवारी सहित भक्तपुर विकासको निम्ति नयाँ खाका अघी बढाएका छौं । हामीले भक्तपुरका सबै क्षेत्रमा व्यवस्थित शहरहरु निर्माण कार्य अघी बढाएका छौं ।
हामीले भक्तपुर खण्डमा मेलम्ची पानीलाई पहिलो चरणमा पूरा गर्ने, मुहानपोखरी बाँध पूरा गर्ने र बहुआयामिक बनाउने, साँगामा बाँध निर्माण तथा विभिन्न झोलुङ्गे पुलहरु बनाउने लगायतका कामहरु अघी बढाएका छौं । अब भक्तपुर नयाँ गतिको साथ विकासको दिशामा अघी जाँदैछ ।
उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोगलाई कसरी अघी बढाउनुहुन्छ ?
हामीले भक्तपुरको स्रोत, साधन र उपलब्ध जनशक्तिको दक्षतालाई परिचालन गर्दै हाम्रो विकासलाई अघी बढाउनेछौं । यस जिल्लामा देशका सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुको समेत बसोबासस्थल बनेको भक्तपुरमा ऊहाँहरुको क्षमतालाई समेत हामीले भक्तपुरको विकासको निम्ति प्रयोगमा ल्याउने योजनामा हामी छौं ।
हामीले भक्तपुरलाई नमुना शहर बनाउने योजना बमोजिम हामी अघी बढेका छौं । सबैलाई साक्षर बनाउँदै, समृद्ध भक्तपुर हाम्रो योजनामा छ । हामीले यहाँ मेडिकल कलेज स्थापना, प्राविधिक शिक्षालय लगायत अन्य विविध गतिविधिहरु अघी बढाइरहेका छौं ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य समेत बन्नुभएको छ, यो खालको ठूलो जिम्मेवारीलाई यहाँले कुन रुपले लिनुभएको छ ?
मैले विगतमा युवा संघको नेतृत्व गर्दा निर्वाह गरेको भूमीकाबाट प्रभावित भएर नै मलाई अहिले यो भूमीका प्राप्त भएजस्तो मलाई लाग्छ । मेरो प्रभावकारी कार्यको कारण भक्तपुरका ४ नगरपालिका मध्ये ३ नगरपालिका, ४ प्रदेश मध्ये ३ प्रदेशमा हामीले हाम्रो जित सुनिश्चित गरेका छौं । साथै अहिले मलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी मेरो राजनीतिक जीवनको निम्ति ठूलो सम्मान पनि हो । नयाँ खुड्किला पनि हो । अब मैले मेरो भूमीका अझ महत्वपूर्ण भएको समेत महसुस गरी समयको उचित सदुपयोग गर्दै आफ्ना गतिविधिहरु अघी बढाएको छु ।
यहाँले विकासको लागि पारदर्शिता सम्बन्धका सवालमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म पारदर्शी तवरले नै काम गर्न चाहना राख्ने व्यक्ति हुँ । काममा पारदर्शिता र व्यवहारमा शुद्धतालाई नै मैले विशेष महत्वको साथ अघी बढाएको हुन्छु । चुनावको परिणाम नआउने बेला सम्म यहाँ कसैले सोचेको थिएन कि मलाई भक्तपुरका जनताले यसरी विश्वास गर्लान् भनेर । तर परिणामले नसोचेको कुरा देखायो नै । यसको साथै मैले मेरो जीवनमा सिकेको र बुझेको कुरा भनेकै सधैं इमान्दार भई काम गर्दा ठूलो विश्वास पाइन्छ भन्ने पनि हो । जुन कसैलाई प्रलोभनमा पारेर प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
२०७० को निर्वाचनमा मबाट भएका कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै सोहीबमोजिम आफू तयार हुँदै मेरा गतिविधिहरु अघी बढाएर नै म अहिले यस स्थानमा आउन सफल भएको छु । अहिले मैले सबै वर्गका व्यक्तिहरुको विश्वास र सहयोग पाएको छु । यसलाई टिकाउन र दिगो बनाउन म निरन्तर लागिरहेको छु ।
तपाईंको विचारमा नेतृत्वमा युवाको भूमीका के रहनुपर्छ ?
पछिल्लो समय नेपालमा युवा वर्ग नेतृत्व तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता जबरजस्त रुपमा अघी बढ्दैछ । हामीले युवा पुस्तालाई अघी बढाउँदा पुरानो पुस्ताले खेलेको भूमीकालाई समेत सम्मान गर्दै वैकल्पिक शक्तिको रुपमा अघी बढाउनुपर्छ । युवा शक्ति भनेका वर्तमानका योद्धा हुन् भने भविष्यका दस्ता पनि हुन् । अब युवा वर्गले राजनीतिमा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमीका निर्वाह गर्नैपर्छ ।
अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिबारे यहाँले भन्नै पर्ने केही कुराहरु छन् कि ?
नेपालको राजनीतिले टुटफुट सहितको निकै लामो इतिहास पार गरेर अहिलेको अवस्थामा आएको छ । पछिल्लो समय प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको निकै महत्वपूर्ण र सक्रिय भूमीकाको कारण मूलुकका २ ठूला राजनीतिक दलहरु एक भएका छन् । अब विभाजन होइन, एकतामा जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै यो सम्भव भएको हो । नेतृत्वले मुलुकको समृद्धिको निम्ति विवेकपूर्ण तवरले भूमीका अघी बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारलाई निकै ठूलो दायित्व र जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । यसलाई जोगाउँदै जनताका इच्छा र आकाङ्क्षा पूरा गर्ने काममा हामी अघी बढ्नु जरुरी छ । आन्तरिक अन्तरविरोधलाई मिलाउँदै सबैलाई सही तवरले सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र हाम्रो मुलुकले सही गति लिन सक्छ ।
(प्रस्तुती गीता खड्का बस्नेत)
बाग्लुङमा नुवाकोटका साहित्यकार श्रीराम श्रेष्ठ सम्मानित
हास्य टेलि शृङ्खला “हल्ली चल्ली”समाजको बिसङ्गती र बिकृतीलाई चिराफरा पार्दै।
अाधुनिक अमरावति कान्तिपुरी नगरी- कवि दिनेश पाण्डे
शैक्षिक सुधारको खाँचो
तरकारी बोकेका गाडी नाका मै रोकिए
धोनीलाई भाजपा भित्राउने कसरत
लोकसेवा सम्बन्धि विधेयक अझै रोकियो
को विप्लव कार्यकर्ता को प्रहरी : घटना के भयो ठम्याउन नै गारो